Tsy Nahazo Medaily Ny Atleta Timorey Nandray Anjara Lalao Olaimpika Fa Mbola Nanentanentana Ny Fireneny Izy Ireo · Global Voices teny Malagasy
Tsy Nahazo Medaily Ny Atleta Timorey Nandray Anjara Lalao Olaimpika Fa Mbola Nanentanentana Ny Fireneny Izy Ireo
Voadika ny 14 Septambra 2016 6:05 GMT
Vakio amin'ny teny Tetun, Français, русский, Español, English
Delegasionan'i Timor Leste nandritra ny lanonana fanokafana ny Lalao Olaimpika 2016 tao Rio de Janeiro. Sary avy amin'i Francelina Cabral
Tsy nahazo medaily tamin'ny Lalao Olaimpika 2016 tany Rio de Janeiro i Timor Leste saingy mbola nahavita nizara hafatra manentana ho an'ireo mpanohana azy sy ireo Timorey mpiray tanindrazana ireo atleta.
Nandray anjara tamin'ny atletisma ho an'ny vehivavy sy ny lehilahy i Timor-Leste, ao koa ny fitaingenana bisikileta an-tendrombohitra manerana ny firenena ho an'ny vehivavy.
Rehefa nahazo fahaleovantena tamin'i Indonezia tamin'ny 2002, dia nandray anjara voalohany tamin'ny lalao Olaimpika i Timor Leste, firenena ahitana mponina latsaky ny 1,5 tapitrisa, tamin'ny taona 2004.
Nelia Martins, atleta 18-taona, no solontena zandriny indrindra avy ao Timor-Leste nandray anjara tamin'ny lalao tany Rio de Janeiro.
Tamin'ny 2014, nifaninana izy ary nahazo laharana fahefatra tamin'ny atletisma vehivavy 5000m Lalaon'ny mpiteny Portiogey tao India. Tamin'ny 2015, nifaninana tamin'ny Lalao Azia Atsimo Atsinanana tao Singapaoro i Nelia. Tamin'ity taona ity, nahazo laharana faha-13 tamin'ny hazakazaka atletisma vehivavy 1500m tao Rio de Janeiro izy.
Nizara ny fihetseham-pony tamin'ny Global Voices i Nelia taorian'ny fiafaran'ny lalao:
Mahatsiaro faly aho sambany tonga eto Brezila mba hifaninana amin'ny Lalao Olaimpika eto Rio de Janeiro (…) amin'ny maha atleta ahy, voninahitra ho ahy ny misolo tena ny sainam-pirenena RDTL “Repoblika Demôkratikan'i Timor-Leste”, misolo tena ny vahoaka Timorey sy ny Federasiona. Tena mahatsiaro faly aho satria na dia vao 18-taona monja aza, dia afaka misolo tena ny sainan'ny firenena amin'ny Lalao Olaimpika. Izay no tiako ambara. Misaotra Anao Timor!
Augusto Soares tamin'ny lalao olaimpika 2016 tao Rio de Janeiro. Sary tao amin'ny pejy Facebook-n'i Francelina Cabral
Augusto Soares no atleta zokiny indrindra tamin'ny delegasionan'i Timor tamin'ny Lalao Olaimpika.
Tamin'ny 2007, nifaninana tamin'ny Lalao Aziatika Anaty trano 3000m tao Makaô izy. Tamin'ny 2009, nandray anjara tamin'ny fifaninanana hazakazaka fifaninanana tamin'ny lalao Aziatika Atsimo Atsinanana tao Vientiane, Laos izy. Tamin'ny 2010, nandray anjara tamin'ny Hazakazaka Atsasaka Marathon tao Dili Timor Atsinanana izy. Ary tamin'ny 2011 izy nifaninana tamin'ny Tompon-daka Aziatika 5000m tany Kobe, Japana. Nandray anjara tamin'ny lalao olaimpikan'ity taona ity tao Rio de Janeiro, Athletisma sokajy lehilahy 1500m, fifaninanana dingana voalohany izy, ary tonga faha-12 i Augusto.
Niresaka tamin'ny Global Voices ihany koa i Augusto taorian'ny lalao:
Voalohany indrindra, misaotra an'Andriamanitra aho noho ny soa rehetra avy Aminy … ary misaotra koa ny fianakaviana, ny mpanazatrako voalohany izay nitari-dalana ahy tamin'ity lalana ity, Ramatoa Aguida Amaral sy ireo mpanazatra sy mpiara-miasa rehetra. Mirehareha izahay misolo tena ny firenena sy ny saina RDTL amin'ity lalao Lalao Olaimpika ao Rio de Janeiro ity. Na dia tsy nahazo na inona na inona aza izahay, dia nahazo traikefa tamin'ny alalan'ny fifaninanana tamin'ireo atleta hafa ivelan'ny firenentsika. Tamin'ity traikefa azonay ity, ho ampitainay amin'ny tanora izany. Holazainay izy ireo mba hifantoka, hamela ny olana manokana ary hifantoka amin'ny fanatanjahan-tena ihany mba hampivelatra ny tenantsika sy hanampy ny firenentsika. Tahaka izany ny lalana nasehoan'ireo maherifontsika tamin'ny tolon'izy ireo [ho amin'ny fahaleovantena]. Izay ihany. Farany Tsy hohadinoiko … Ho ela velona i Timor-Leste …
Delegasionan'i Timor Leste tamin'ny lalao Olaimpika miaraka amin'ireo atleta avy ao Paortiogaly (faharoa avy eo ankavanana). Sary avy amin'i Francelina Cabral
Francelina Cabral no vehivavy Timorey voalohany nifaninana tamin'ny fandehanana am-bisikileta an-tendrombohitra tamin'ny lalao fanatanjahan-tena Olaimpika. Vehivavy matihanina amin'ny hazakazaka am-bisikileta izy izay efa nifaninana tamin'ny faritra maro tao Timor Atsinanana nanomboka tamin'ny 2009.
Tamin'ny tafatafa niarahana tamin'ny Global Voices, namariparitra ny fifaninanana hazakazaka am-bisikileta an-tendrombohitra tamin'ny Lalao Olaimpika ho toy ny “mafy loatra” noho ny fitaingenana bisikileta mahazatra i Cabral:
Matihanina avokoa ireo atleta nifaninana tamin'ny lalao, tahaka izao no nataon'izy ireo, manao fampiharana, misakafo, maka aina ary manao fanazarana indray (…) fantatro ihany koa fa na inona na inona, tena henjana indrindra ny hazakazaka am-bisikileta an-tendrombohitra.
Nofaranan'i Cabral ny resaka tamin'ny filazana fa mahatsiaro nahazo voninahitra izy sambany nisolo tena ny fireneny tamin'ny Lalao Olaimpika. Na dia tsy afaka nitondra medaily nody aza izy, nanolotra medailim-boninahitra symbolika ho an'i Timor-Leste izy.
Nandray anjara tamin'ny Lalao ParaOlaimpika ihany koa i Timor-Leste. Hisolotena amin'izany ireo atleta vehivavy sy lehilahy amin'ny fifaninanana atletisma 400m.
Sary mampiseho ny sainam-pirenen'i Timor Leste tao amin'ny tranonkala ofisialin'ny Lalao Olaimpikan'i Rio 2016
15 ora izayHong Kong (Shina)